Xildhibaanka degmada Ugunja oo ku goodiyay in uu aqalka barlamaanka horgeyn doono mooshin ka dhan ah Matiangi – The Voice of Northeastern Kenya
Xildhibaanka degmada Ugunja oo ku goodiyay in uu aqalka barlamaanka horgeyn doono mooshin ka dhan ah Matiangi
Xidlhibaanka laga soo dortay degmada Ugunja Opiyo Wandayi ayaa ku goodiyay in uu aqalka barlamaanka ee dalka horgeyn doono mooshin ka dhan ah wasiirka wasaarada waxbrashada Dr Fred Matiangi.
Mudanahan ayaa shaaca ka qaaday sida uu u la yaaban yahay wasiirka maadama isaga oo aan wax wada tashi ah sameynin in uu shaqada ka istaajiyo saraakisha waxbrashada ee Maamul goboledka Siaya.
Waxaa la xasustaa in Fred Matiangi uu goor sii horeysay shaqada ka istaajiyay qaar kamid ah mas’uuliyinta waxbarashada Countiga Siaya maadama countigaas uu soo saaray warqado imtixaan oo ay ku sawiran yihiin gavanaha Siaya Cornle Rasanga.
Sababihii kale oo arintas u sameeyay ayaa waxay eheyd in ay jabiyeen amarkii isaga kasoo baxay oo ahaa in ardayda fasalka sideedaad iyo kuwa fasalka afaraad ee dugsiga sare aysan u fariisanin imtixaanada hor dhaca u ah midka qaran ee KCPE-da iyo KCSE-da.
Xildhibaanka ayaa hoosta ka xariiqay in tiilabada uu wasiirka qaaday ay tahay sidii cagta loogu idtaajin lahaa qowmiyada luuyada iyo guud ahaan siyaasinta kasoo jeeda xisbiyada siyaasada maadama gavanaha uu kasoo jeedo xisbiga ODM oo uu raila Odinga hogamaiyo.
Opiyo ayaa hadda ku goodinayaa in mooshin uu isaga maal galiyay oo ka dhan ah matiangi sidii xilka looga xayuubin lahaa uu keeni doono aqalka barlamaanka.
Arintan aya waxay baraha bulshada si aad looga hadlayay iyado countiga Siaya ay ku andacooden in hagaajinta warqadahaasi ay ooga baxeen lacag dhan 1.7 milyan oo shilin.
← Gudiga adeega macalimiinta oo baaraya dhimashada arday la garaacay
Macalin u geeriyooday kaniin xanuun baa’biye ah oo uu laqay kadib →